Mon GTI / GTC / GTU: Letters from teachers(September)
Letters from teachers(September)
ဆရာဆရာမများထံမှ ပြန်စာများကို စက်တင်ဘာလတွင်လက်ခံရရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုအထဲမှ အနည်းငယ်ကို ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
Thank you very much for your pay, respect to our teachers.
May god bless with you.
Phyu Phyu Nyunt
အမိနိုင်ငံရဲ့ အဝေးတစ်နေရာမှာ တစ်ကျောင်းထဲက မောင်နှမတွေစုပြီး ဒီလို ကောင်းမြတ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက် အားလုံးကို လေးစားမိပါတယ်။ ဆရာ၊ဆရာမတွေထဲမှာ ဝါအနည်းဆုံးနဲ့ အငယ်ဆုံးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခြားဆရာကြီး၊ ဆရာမကြီးများလို မရေးတတ်တာ ခွင့်လွှတ်ကြပါ။
`ဆန္ဒအားလုံး ပြည့်စုံကြပါစေ။ အခြေနေ အချိန်ခါကောင်းများ ထာဝစဉ် ကြုံတွေ့ကြပါစေ’ လို့ ဆုတောင်း ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျန်းမာချမ်းသာ၍ ဆန္ဒအားလုံးလည်း ပြည့်စုံကြပါစေ။
တပည့်များ အားလုံးကို သတိရခြင်းများစွာဖြင့်
ဆရာတို့ကို သတိရခြင်း၊ ကန်တော့ရခြင်းကြောင့် သိပ်ကိုဝမ်းလည်းသာတယ်။ ကျေးဇူးလည်း အများကြီး တင်ပါတယ်။
ယခုလို ဆရာတို့ကို အဝေးမှ ကန်တော့တာကို ဆရာတို့ လူကိုယ်တိုင်မမြင်ရပေမယ့် ကျောင်းသူ/သားဟောင်းများ ရဲ့စာရင်းကို ကြည့်ပြီး ဆရာသတိတရ ဖြစ်နေပါတယ်။ နောင်အခါ ကံဆုံရင်တော့ လူကိုယ်တိုင် ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကန်တော့ရပြီး ဆရာတို့နဲ့ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရပါစေလို့ ဆရာဆုတောင်း ပေးလိုက်ပါတယ်။
မော်လမြိုင် GTI ကျောင်းသူ/သား ဟောင်းများကို အစဉ်အမြဲသတိရလျှက်
တပည့်များအားလုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေ။
tinwinaung 28 November 2009 at 05:44
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ နည္းပညာပထမနွစ္(၂၀၀၈-၂၀၀၉)တြင္သင္ၾကားေနေသာသင္တန္းသားျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္ေတာ္နာမည္ကေတာ့ တင္၀င္းေအာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ ့တြင္ေနထိုင္သူျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္သည္ယခုနွစ္တြင္ပညာသင္ၾကားေနေသာ ျမိဳ ့ျပ ေမဂ်ာမွ ေကာင္မေလးကို စိတ္၀င္းစားေနသူလည္းျဖစ္ပါသည္။